“Dalkayga uma quudho colaadda sokeeye ee Soomaaliya ka taagan oo kale” Madaxaweynaha Yemen. – Radio Daljir
Sanca, May 25 – Madaxweynaha dalka Yemen Cali Cabdalla Saalix ayaa sheegey in aanuu dalkiisa u quudhin sida Soomaaliya colaad sokeeye.
Madaxweyne Saalix oo imika la tacaalaya dagaal qaab qabyaalad u sii xuubsiibanaya oo lagu doonayo in xukunka lagaga tuuro ayaa sheegey in waddada kaliya ee uu dalkiisu hannaan nabdoon oo isbeddel ku higsan karaa ay tahay in dadka Yamaanidu ay ku wada hadlaan meel aan ahayn albaabo xidhan dabadood, taasina uu sheegey in uu hubo in ay natiijo manfac badan leh ka iman karto.
Hadalladan aayo ka talinta u eg ee ka soo yeedhey madaxweyne Saalix ayaa ku beegan xilli uu dagaal qadhaadh ku sii baahayo waddooyinka caasimadda Sancaa ee dalkaasi, taasina waxa ay ka dambaysay markii ay mucaaradku ka cadhoodeen diidmadii madaxweyne Cali Cabdalla Saalix ee saxiixa heshiis ay gadhwadeen ka ahaayeen dalal carbeed oo isku dayay in uu madaxweynaha Yemen xukunka qaab nabdoon uga dego, taasoo ay door bidayeen badbaadada dalkaasi. Heshiiskaas oo saxiixiisa uu madaxweynaha Yemen ka baaqsaday ayuu ku tilmaamay mid albaabo xidhan dabadood lagaga soo shaqeeyey oo aan u cuntamin.
Ciidamada ammaanka ee dalkaas iyo taageerayaasha madaxweynaha Yemen ayaa la sheegey iska hor imaadyo ay waddooyinka Sacna kula galeen mucaaradka in ay ku dhinteen ugu yaraan 39 qof.
Madaxweynaha Yemen ayaa ugu baaqay mucaaradku in ay wadahadal nabdoon oo aanay cidi faragelin in ay la yeeshaan, joojiyaanna qalalaasaha dowladdiisa ka dhanka ah, taas ayaana uu ku tilmaamay waddada kaliya ee uu dalkiisu kaga baaqsan karo dagaal sokeeye.
Mucaaradka ayaa dhankooda sheegey in haddii taageerayaasha hubaysan ee madaxweynaha Yemen aanay joojin ka qayb qaadashada colaadaha uu dalkaasi ku sii siqi doono colaad sokeeye.
Yemen waxaa ku nool boqollaal kun oo Soomaali qaxooti ah, waxana ay dadkaasi dhibbaneyaal u yihiin marxaladda dalkaas ka taagan. Qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee Yemen ayaa dhawaan dib ugu soo noqday Soomaaliya.
Yemen ma aha dalkii ugu horreeyey ee ku soo hal qabsada colaadda sokeeye ee Soomaaliya. Liibiya ayaa mucaarad iyo xukuumadba ay ku halqabsadaan colaadaha sokeeye ee Soomaaliya ka taagan oo ay u arkaan kuwo loo aan dawo lahayn, farahana ka baxay.
Rardio Daljir http://daljir.com/